Military News Archives - Sone Lin
Military News May 8, 2022
NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်ထံ ကတိအတိုင်း လက်နက်တပ်ဆင်ပေးရန် ဗိုလ်နဂါးတောင်းဆို
သို့ ဦးရည်မွန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အကြောင်းအရာ။ ။ တပ်ရင်းတရင်းစာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပါရန်တင်ပြခြင်းကိစ္စ။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူလူထုဘဝအား အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ အဓမ္မလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက် (NUG) အစိုးရမဖွဲ့မှီ ၂၀၂၁-ဧပြီနှောင်းပိုင်းမှစ၍ ရရာလက်နက်ဆွဲကိုင်ကာ ယနေ့ထိတိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များ၏ အသက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ခြေ၊ လက်အဂ်ါများဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်အထိ ကြိုးစားပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်နေခဲ့သည်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံး သိရှိကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ (NUG) အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MOD) တွင်လည်းတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များစနစ်တကျပေးသွင်း၍ အသိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ကျွန်ုပ်တို့ဒေသအား…
ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်တော့မည်၊ ဇာတ်လမ်းရဲ့အထွတ်အထိပ် ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်လာပြီမို့..ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပြီ။ အာဆီယံကNUG. ပြည်သူ့အစိုးရကို ထိတွေဆက်ဆံမည်ဟု.ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လျှင်..ပွဲက ပြီးတော့မည်။ မလေးရှားကတော့”သူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို.စစ်ကောင်စီ ဝက်ကြီးက အမိန့်ပေး ပုတ်ခတ် စော်ကားလိုက်သဖြင့် မခံချိမခံသာဖြစ်ကာ..သူအဆိုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မည်ထင်သည်။ ကာပုရဲ့ဟန်​ပြငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်ချက်ကလည်း အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ငြင်းပယ်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။.. ကာပုလိုချင်တာက KIA. (KIO)KNU. KNPP.နဲ့ .CNF. စသည် အင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များကိုဖြစ်သည်။ တကယ်ရောက်လာမှက..သူခေါ်တိုင်းလာ.သူခိုင်းရာလုပ်ပြီး..အခွင့်အရေးချောင်းနေကြတဲ့.ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းတောင်ထောက်ခံမှုမရသည့်..မူးယစ်ကုန်သည်များသာဖြစ်သည်။ (ဒီနေရာမှာ ကာပုကြင်စိုးဟာ..တိုင်းပြည်ကိုသူပိုင်ပစ္စည်းလို သဘောထားကာ နိုင်ငံမျက်နှာပြည်သူမျက်နှာကိုမငဲ့ကြည့်ပဲ..သူ့တစ်ကိုယ်စာထွက်ပေါက် အတွက် လုပ်ရာလုပ် ပေးချင်ရာပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ နောက်လူတွေဖြေရှင်းရခက်မည့်အနေအထားမျိုးဖန်တီးပြီး”မစားရတဲ့အမဲ သဲနှင့်ပက်မည်ဟုကြံစည်နေသည်။)အရည်အသွေးနှင့်စည်းကမ်းပိုင်းတွင်ယိုယွင်းပျက်စီးနေသော သူတပ်ကိုထိမ်းချုပ်ရန်မလွယ်တော့မှန်း.သူသိလာပြီ။ ခေါင်းမာသော…
ပဌာန်းရွတ်ဖို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာဘဲ အောက်ခြေတပ်ရင်းလိမ်လည်နေလို့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံနှင့်တကွ တင်ပြရန်ညွှန်ကြား
စစ်ကောင်စီတပ်မှ အောက်ခြေတပ်ရင်း၊တပ်ဖွဲ့များတပ်တွင်းဓမ္မာရုံများတွင် ပရိတ်၊ပဌာန်းများရွတ်ဖတ်ရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံနှင့်တကွပေးပို့တင်ပြရန်ညွှန်ကြားသည့် တပ်ကြေးနန်းတစောင် လူမှုကွန်ယက်တွင် ပေါက်ကြားပြန့်နှံ့နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ စစ်ကောင်စီက ၄င်းတို့လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများရှိ စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်များကို တလ ၂ ကြိမ် ပရိတ်၊ပဌာန်းများ ရွတ်ဖတ်ရန်ညွှန်ကြားထားပြီး အောက်ခြေတပ်ရင်းများမှ လိုက်နာမှုအားနည်းသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွဖော်ပြရန်ညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများမှ စစ်ကောင်စီ ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အောက်ခြေတွင် အမှန်တကယ်မရွတ်ဖတ်ဘဲ ယခင်ဓာတ်ပုံအဟောင်းများအသုံးပြု၍ လိမ်လည်တင်ပြနေသည်ဟုဆိုသည်။ ” ညွှန်ကြားချက်က တလ ၂ ကြိမ်…
Military News May 7, 2022
စစ္ေခါင္းေဆာင္ မအလ ကိုယ္တိုင္ခန႔္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ျပန္ျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ မတူညီေသာ ရဲခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး၏ တူညီေသာ နိဂုံ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ မအလ ကိုယ္တိုင္ခန႔္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ျပန္ျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ မတူညီေသာ ရဲခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး၏ တူညီေသာ နိဂုံး *********************************** အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္သည္ တႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ရဲခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးကို အနားေပးခဲ့သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အနားေပးခဲ့ေသာ ရဲခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးမွာ သူ႔လူရင္း သို႔မဟုတ္ သူယုံၾကည္ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းသည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ဝင္းဦးကို အနားေပးခဲ့သည္။ ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္ဝင္းဦးသည္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ…
အမှတ် ၁ ကုတင် ၁,၀၀၀ မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံတွင် စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော အရာရှိများ စစ်သားများဖြင့် ပြည့်နှက်နေ
အမှတ် ၁ ကုတင် ၁,၀၀၀ မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံတွင် စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော အရာရှိများ စစ်သားများဖြင့် ပြည့်နှက်နေ၊ အရိုးကုသဆောင်တွင် လူနာ တစ်ရာကျော်နေဟု CDM ဗိုလ်ကြီး ပြော ရန်ကုန်၊ မင်္ဂလာဒုံရှိ အမှတ် ၁ ကုတင် ၁,၀၀၀ စစ်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသနေသော ဒဏ်ရာရ အရာရှိများ စစ်သည်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပြီး ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ၁ ဦးအပါအဝင်…
မြောင်တွင် မိုင်းမိ၍ အတွင်းလူနာ ဖြစ်သော စစ်သား ၄ ဦးကို ဆေးရုံပို့သည့် စစ်ကြောင်း PDF ထောက်ချောက်မိ၍ ကားမှောက်ဒဏ်ရာရ၊ ကူညီရန်လာသော စစ်ကြောင်း ထပ်မံမိုင်းမိပြန်
မြောင်တွင် မိုင်းမိ၍ အတွင်းလူနာ ဖြစ်သော စစ်သား ၄ ဦးကို ဆေးရုံပို့သည့် စစ်ကြောင်း PDF ထောက်ချောက်မိ၍ ကားမှောက်ဒဏ်ရာရ၊ ကူညီရန်လာသော စစ်ကြောင်း ထပ်မံမိုင်းမိပြန် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် မိုင်းမိ၍ ဒဏ်ရာရရှိသော အတွင်းလူန စစ်သား ၄ ဦးကို မြောင်မြို့နယ် ဆေးရုံမှ မုံရွာမြို့ရှိ ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ပြီး ပြန်လာသည့် စစ်ကြောင်းသည် PDF များထောင်ထားသော ထောက်…
မင်းအောင်လှိုင် အင်းလျားလမ်းနေအိမ် ရောင်းချမှု ပထမနေ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၇ သိန်းကျော်ဖိုး ရောင်းချရ
မင်းအောင်လှိုင် အင်းလျားလမ်းနေအိမ် ရောင်းချမှု ပထမနေ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၇ သိန်းကျော်ဖိုး ရောင်းချရ စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်၏ အင်းလျားလမ်းနေအိမ်ကို မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်လိုက်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ သိန်းကျော်ဖိုး ရှယ်ယာများ ရောင်းချရကြောင်း NUG အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ၏ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်က အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်…
ရန်သူ့ရိက္ခာ ကိုယ့်ရိက္ခာ ရန်သူ့လက်နက် ကိုယ့်လက်နက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ရိက္ခာများတင်ဆောင်လာသော အမြန်ရေယာဥ် ၃ စီးကို ယမန်နေ့ မေလ ၆ ရက် ညနေပိုင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ နဂါးညီနောင်တပ်ဖွဲ့- DBTF ကထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါရေယာဥ်များသည် မုံရွာမှ ခန္တီးမြို့ကို ထွက်ခွာလာသည့်ရေယာဥ်များဖြစ်ပြီး ကနီမြို့နယ်အတွင်း တပ်စွဲထားသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များထံပို့ဆောင်မည့် တပ်ရိက္ခာများတင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တပ်တွင်းဖရဲသီး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ ဖမ်း​ဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး DBTF အနေဖြင့်တပ်ရိက္ခာများကိုသာဖမ်း ဆီးသိမ်းဆည်းထားကာ အမြန်ရေယာဥ်နှင့်ရေလုပ်သားများကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ သိမ်းဆည်းထားသည့် ဆန်…